China Umgangatho wePolypeptide Antibiotic Enramycin abavelisi kunye nabathengisi | Senton
CAS Hayi: 1115-82-5
Ubunzima beFomyula:2355.30 g / mol
PIgama eliyimveliso: Enramycin
Packaging: I-25KG / iDrum, okanye njengemfuneko yeCustimised.
Imveliso: Iitoni ezili-1000 / inyanga
Ikhowudi ye-HS: 2925190024
Izibuko: Shanghai, Qingdao, Tianjin
I-Enramycin luhlobo lwe-polypeptide antibiotics equlunqwe yi-asidi ye-fatty engafakwanga kunye ne-amino acid. Iveliswa yiStreptomycesfungicides.Enramycin yavunywa ukuba yongezwe kukutya okusetyenziselwa ixesha elide liSebe lezoLimo ngo-1993, ngenxa yokhuseleko lwayo kwaye kakhulu Unamandla okulwa ne-bacterial asebenzayo ngokubhekiselele kwintsholongwane ye-gram-positive, indlela yokulwa ne-antibacterial inhibit cell bacterial synthesis. Inomsebenzi onamandla we-bactericidal ngokuchasene ne-Clostridium eyingozi emathunjini, iStaphylococcus aureus, iStreptococcus njalo njalo.
Ngelixa sisebenza le mveliso, inkampani yethu isasebenza kwezinye iimveliso, njenge Umdibanisi Izihlalo,UDinotefuran Umgubo,Inambuzane I-Acetamiprid Methomyl,Imidacloprid Umgubo,Umsebenzi kaKing Quenson woQhakamshelwano Izinambuzane kwaye nangokunjalo.
Ufuna olona hlobo luhlobo lwePolypeptide Antibiotic Manufacturer kunye nomthengisi? Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Zonke izinto eziveliswa yiStreptomyces Fungicides ziqinisekisiwe ngomgangatho. Siyi-China Imvelaphi yeFektri yokuSebenza ngokuSebenzayo kweNtsholongwane. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
I-Enramycin enokuSebenza okukuSebenza okuNcomekayo kwe-E ...
Umgangatho ophezulu we-Aminomethyl Benzoic acid
I-Synthetic Pyrethroid Insecticide Pyrethroid Imi ...